Home » Entries posted by Abuukar Albadri
SHeekh Axmed-Nuur Cali Jimcaale, Ma Mudnaa In Lagu Daro Liis Argagaxiso?
Bartankii 2000 ayey aheyd markii iigu horeysay ee aan arkay Sheekh Axmed-Nuur Cali Jimcaale, xilligaas oo aan ka qeyb galaayey xaflad ay soo abaabushay shirkaddii Al-Barakaat ee isgaarsiinta, isla markaasna abaal marino lagu guddoonsiinaayey Branch-yada shirkadda ee sida wanaagsan u shaqeeyey iska bixiyey lacagaha ay shaqeeyeen. Aniga ma laheyn Branch Al-Barakaat ah, balse waxaan wehlinayey [...]
February 24, 20122 CommentsRead More
XASUUQII LABA GU’ JIRSADAY
Seddaxda bishan Diseember waa maalin ku asteysan naxdin iyo argagax laga dhaxlay xasuuq gardarro huwaday ee lala eegtay arday shahaadooyin ka qaadaneysay Jaamacadda Banaadir. Maalintan waxay astaan u noqotay mugdi hareeyey shacabka, kaddib markii biri mageydo lagu laayey goob farxadeed loo bedelay goob argagax. Shaki kuma jiro in qofkii fuliyey iyo kii soo abaabulay intaba [...]
Tuug Dhagool ah! “Qaladaadka Taariikhiga ah ee Wadaadada Soomaaliya”
Waxaan ka mid ahay inta yar ee aadka ugu hiil heysa in Soomaaliya Shareecada Islaamka lagu xukumo. Allaahna waxaan ka baryaa mar walba inuu hankaasi inooga dhabeeyo. Haddana waxaan aad ugu wareeray, saluugay, kana niyad jabay sida ay xaaladda u wajahaan wadaadada Soomaaliyeed xil doonka ah. Iyo sida ay ugu qanacsan yihiin qaladaadka dhiig iyo [...]
January 21, 20114 CommentsRead More
Riyada Atom iyo Rajada Faroole tee baa Rumoobi Doonta?!!!
Siyaasaddii Soomaaliya waxay u jiheysatay dhan cusub oo ka duwan dagaalada la daba dheereeyay ee Muqdisho ka socda. Waxaa la qorsheynayaa Muqdisho inay yimaadaan ciidamo hor leh oo Afrikaan ah kuwaas oo ku biiraya kuwa AMISOM ee haatan xasuuqa ba’an ku haya shacabka waxaana magaca nabad ilaalin loogu bedelayaa nabad dhaliyeyaal taas oo macnaheedu yahay [...]
Bugtada Taala PAL TALK iyo Balaayada Taala Muqdisho isu Bidhaan Ekaa!!!
Sahan uu albadri ku sameeyey sida ay Soomaalida u adeegsato aaladda Pal Talk)… Stockholm – U maleyn mayo inuu jiro qof igu diidaya inaan ku saxanahay soo bandhigida xaqiiqda la xiriirta nolosha Soomaalida dhan walba oo ay ahaato. Anigoo dhabbahaas ku taagan ayaan sahan maalmo qaatay ku sameeyey aalada Pal talk-ga oo ah aalad ay [...]
July 23, 20102 CommentsRead More
Sheekh Cumar Faaruuq Shalayna wuu Saxnaa Maantana wuu Saxan Yahay!!!
Waxaan akhriyey faallo ku saabsan Sheekh Cumar Faaruuq oo uu qalinka dul dhigay qoraa sare Bashiir Maxamed Xirsi, taas oo uu Bashiir ku faaqiday hadal ka soo yeeray Sheekha oo ahaa inuusan waxba ka qabin inay ciidamo Afrikaan ah dalka yimaadaan. Markii aan wada dhuuxay faallada Bashiir oo ah mid si aad ah u xirfadeydan, [...]
July 15, 20108 CommentsRead More
1-da Luulyo, Maalintii Raadiyo Shabeelle uu Xuriyadiisii Qaatay!!!
Stockholm-Kowdii Luulyo ee 2008-dii ayaan qoray qormo aan ugu magac daray XURNIMOY OOY! Oo aan kaga hadlayey maalintan aan xuriyadeena ka qaadanay gumeystihii Talyaaniga iyo kii Ingiriiskaba. Qoraalkaasi waxaan kaga hadlayey inuusan dalka Soomaaliya weli xur aheyn. Runtey bey aheyd oo waxaa dalka heystay gumeyste kii ugu foosha xumaa oo ah amxaaro injireey. Waagaas waxaa [...]
July 7, 20103 CommentsRead More
Khilaafkan Shakhsiyaadka ka Bilowday ee Golayaasha isu Bedelay Muxuu Salka ku Hayaa?!!
Baarlamaankii dalka ayaa ku shiray golaha shacabka. Guddoomiyihii ayey Xilkii ka qaadeen. Guddoomiyihii dowladii ayuu cod kalsooni u qaaday kuna riday. Ra’iisal wasaarihii ayaa arrintaasi beeniyey. Guddoomiye cusub oo KMG ah ayaa la doortay. Ninka ugu da’da weyn ayuu ahaa. Guddoomiyihii hore wuu is casilay. Madaxweynaha dowladii ayuu kala diray. Raiisal wasaarihii ayaa leh sidaasi [...]
Xasuuqani u Ekaa Midkii Asxaabul Ukhduudka!! (Qormo ku Saabsan Qarixii Masjidka Bakaaraha)
Ugu horeyn waxaan leeyahay “Ninka Allaah la dagaalayoow habeenna tabartaa … Maalina taagtaa….masjidka Allaah ayaa leh, addoomada ku dukanaayana isagaa abuurtay… isaga ayey caabudayeen, dilkaagana kagama joogi doonaan cibaadeysiga insha allaah” Innaa Lilaahi Wa innaa Ileyhi Raajicuun. Wallilaahil Cizatu, Wali rasuulihii, Walil Mu’miniin. Wallaahu Maca saabiriin. “Yaa Mu’miniina al Musalliin, isbiruu fa inna mowcidakum al [...]
May 4, 20103 CommentsRead More
Ma Gole Baarlamaan Mise Gole Ceebeed?!!!
Marka ay doodaha ceebeed la soo shir tagaan ma xishoodayaasha casriga, iyadoo ay isku heystaan wax ay xoolahaba ka shiixi lahaayeen inay isku qabsadeen, warbaahintuna ogolaato inay soo tebiyaan hadalo qufac u dhigma, qofkii damiir lihi god dheer ayuu galayaa si uusan marqaati ugu noqon ceebta haysata qolada xildhibaanada sheegata. Inkastoo ujeedkeeygu yahay inaan qalinta [...]
April 9, 20101 CommentRead More